ဒီ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ်ပါ… – Messi Club
ဒီ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို နှစ်ဆပိုချစ်ပါ…
သငျ့ ခဈြသူ မိနျးကလေး ကို ရငျခုနျသံ မွနျလာစမေယျ့ အကွောငျးအရာတှကေ ဘာတှမြေားဖွဈမလဲ ?
ယခုဖျောပွမယျ့ အခကျြ (၅) ခကျြက အရမျး Romantic မဆနျပမေယျ့ သငျ့ခဈြသူ မိနျးကလေး ဟာ ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ပဲ သငျ့ကို နှဈဆပိုခဈြလာမှာပါ
၁။ သူမ ကို အမွဲ ကာကှယျပေးခွငျးသူမ နဲ့အတူ လမျးလြှောကျထှကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ရုတျတရကျ နအေရမျးပူလာရငျ သငျ က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ သှားမယျ့ လမျးကွောငျးမှာရှိတဲ့ တံခါးမှနျသမြှကို သငျက ကွိုဖှငျ့ထားပေးတာ၊
သူမ နဲ့ ကားအတူစီးလာရငျလညျး ကားတံခါးကွိုဖှငျ့ ထားပေးတာ၊ အစရှိတဲ့အခကျြတှဟော သေးသေးမှားမှားလို့ ထငျရပမေယျ့ သငျ့ ခဈြသူ မိနျးကလေး ဟာ ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ပဲ သငျ့ကို လူကွီးလူကောငျး အဖွဈ မွငျလာပွီး သငျနဲ့အတူရှိရတာ လုံခွုံတယျလို့ ခံစားလာမိမှာပါ။
၂။ သူမ ရဲ့ မိသားစု ကို တနျဖိုးထားခွငျးမိသားစု ဆိုတာ လူတို ငျးအတှကျ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့ ခဈြသူ အတှကျလညျး အရေးကွီးမှာပါပဲ။ သူမ ရဲ့ ငယျဘဝအကွောငျးတှေ၊ ကလေးဘဝက ဓါတျပုံတှေ၊
သူမရဲ့ မိဘ နဲ့ မောငျနှမ တှအေကွောငျးပါမကနျြ အကုနျလုံးကို စိတျဝငျစားသငျ့ပါတယျ။ သူမ ရဲ့မိသားစုကို တနျဖိုးထားပေးတဲ့ သငျ့ကိုလဲ သူမ က အရမျးတနျဖိုးထား ခဈြပေးမှာ သခြောပါတယျ။
၃။ အကွောငျးပွခကျြ မရှိ လကျဆောငျ ပေးခွငျးလူအမြားစုဟာ အမှတျတရ နတှေ့မှောပဲ ကိုယျ့ ခဈြသူ ကို လကျဆောငျပေးတတျကွတာပါ။ သငျက ဘာအကွောငျးပွခကျြမှ မရှိဘဲ လကျဆောငျပေးလိုကျမယျဆို
သူမ အရမျးကို ပြျောရှငျသှားမှာ သခြောပါတယျ။ လကျဆောငျ ဟာ တနျဖိုးအရမျးမကွီးတဲ့ ပနျးစညျးလေးဖွဈနရေငျတောငျ သူမ အတှကျ အရမျးပွညျ့စုံနပွေီး သငျ့အပျေါ အခဈြ တှေ တိုးလာစမှောပါ။
၄။ လူအမြားကွားမှာလဲ သူမ ကို ကွငျနာစှာ ဂရုစိုကျခွငျးသငျ့ မိတျဆှေ တှနေဲ့ တှဆေုံ့တဲ့အခါမှာလညျး သူမ နဲ့ ဂရုစိုကျပွီး မိတျဆကျပေးသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ မိတျဆကျမပေးဘဲ မသိသလိုနလေိုကျမယျဆို သူမ ရငျထဲ အားငယျစိတျတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
သငျ့သူငယျခငျြးတှကွေားမှာလဲ သူမကို ဂရုစိုကျပေးမယျဆို သငျ့ကို အရမျးခဈြလာမှာ အမှနျပါပဲ။
၅။ သူမ ရဲ့ နဖူးလေး ကို နမျးပေးခွငျးဒီအခကျြကတော့ ပွောနစေရာတောငျ မလိုတော့ပါဘူးနျော။သူမရဲ့ နဖူးလေး ကို သငျနမျးလိုကျတဲ့အခြိနျတိုငျး သငျ့ အခဈြ တှကေို သူမ က ခံစားမိသှားမှာဖွဈလို့ အခဈြတှေ ပိုတိုးလာပွီး အရမျးပြျောရှငျရတဲ့ ခဈြသူဘဝကို အမွဲပိုငျဆိုငျနမှောပဲ ဖွဈပါတယျ Credit
သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ကို ရင်ခုန်သံ မြန်လာစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ?
ယခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၅) ချက်က အရမ်း Romantic မဆန်ပေမယ့် သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို နှစ်ဆပိုချစ်လာမှာပါ
၁။ သူမ ကို အမြဲ ကာကွယ်ပေးခြင်းသူမ နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရက် နေအရမ်းပူလာရင် သင် က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ တံခါးမှန်သမျှကို သင်က ကြိုဖွင့်ထားပေးတာ၊
သူမ နဲ့ ကားအတူစီးလာရင်လည်း ကားတံခါးကြိုဖွင့် ထားပေးတာ၊ အစရှိတဲ့အချက်တွေဟာ သေးသေးမွှားမွှားလို့ ထင်ရပေမယ့် သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို လူကြီးလူကောင်း အဖြစ် မြင်လာပြီး သင်နဲ့အတူရှိရတာ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားလာမိမှာပါ။
၂။ သူမ ရဲ့ မိသားစု ကို တန်ဖိုးထားခြင်းမိသားစု ဆိုတာ လူတို င်းအတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင့် ချစ်သူ အတွက်လည်း အရေးကြီးမှာပါပဲ။ သူမ ရဲ့ ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေ၊ ကလေးဘဝက ဓါတ်ပုံတွေ၊
သူမရဲ့ မိဘ နဲ့ မောင်နှမ တွေအကြောင်းပါမကျန် အကုန်လုံးကို စိတ်ဝင်စားသင့်ပါတယ်။ သူမ ရဲ့မိသားစုကို တန်ဖိုးထားပေးတဲ့ သင့်ကိုလဲ သူမ က အရမ်းတန်ဖိုးထား ချစ်ပေးမှာ သေချာပါတယ်။
၃။ အကြောင်းပြချက် မရှိ လက်ဆောင် ပေးခြင်းလူအများစုဟာ အမှတ်တရ နေ့တွေမှာပဲ ကိုယ့် ချစ်သူ ကို လက်ဆောင်ပေးတတ်ကြတာပါ။ သင်က ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိဘဲ လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆို
သူမ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ လက်ဆောင် ဟာ တန်ဖိုးအရမ်းမကြီးတဲ့ ပန်းစည်းလေးဖြစ်နေရင်တောင် သူမ အတွက် အရမ်းပြည့်စုံနေပြီး သင့်အပေါ် အချစ် တွေ တိုးလာစေမှာပါ။
၄။ လူအများကြားမှာလဲ သူမ ကို ကြင်နာစွာ ဂရုစိုက်ခြင်းသင့် မိတ်ဆွေ တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်း သူမ နဲ့ ဂရုစိုက်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မိတ်ဆက်မပေးဘဲ မသိသလိုနေလိုက်မယ်ဆို သူမ ရင်ထဲ အားငယ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလဲ သူမကို ဂရုစိုက်ပေးမယ်ဆို သင့်ကို အရမ်းချစ်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
၅။ သူမ ရဲ့ နဖူးလေး ကို နမ်းပေးခြင်းဒီအချက်ကတော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူးနော်။သူမရဲ့ နဖူးလေး ကို သင်နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း သင့် အချစ် တွေကို သူမ က ခံစားမိသွားမှာဖြစ်လို့ အချစ်တွေ ပိုတိုးလာပြီး အရမ်းပျော်ရွှင်ရတဲ့ ချစ်သူဘဝကို အမြဲပိုင်ဆိုင်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် Credit